करिनाका तीन वर्षिय छोरा तैमुरको यस्तो चर्तिकला ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodकरिनाका तीन वर्षिय छोरा तैमुरको यस्तो चर्तिकला !
करिनाका तीन वर्षिय छोरा तैमुरको यस्तो चर्तिकला !
बलिउडका चर्चित अभिनेता सैफ अलि खान र अभिनेत्री करिना कपूरका छोरा तैमुर अलि खान अहिले करिब ३ वर्ष पुग्न लागेका छन् । यसै बीचमा करिनाले छोरा तैमुरलाई लिएर उनको दिदि अर्थात तैमुरका ठुलो मम्मी करिश्मा कपूरको घर गएकी थिन । कुनै पनि काम अनि कुरालाई प्राए मानिसहरुले खुन अनुसार भनेका हुन्छन । जुन यहाँ तैमुरले पनि देखाएका छन् ।
जब करिना आफ्नो कारबाट ओर्लिएर तैमुरलाई करिश्माको घरभित्र लैजाँदै थिइन्, पत्रकारहरु फोटो खिच्न लागे । करिना छोरालाई भित्र तानिरहेकी थिइन् तर तैमुर भने फोटोग्राफर्सलाई विभिन्न पोज दिइरहेका थिए । यतिमात्र होइन तैमुरलाई भित्र लैजान करिनालाई हम्मे हम्मे नै पर्यो । करिना छोराको हात समातेर भित्र तानिरहन्थिन् भने तैमुर बाहिर आइरहेका थिए । तैमुर पटक पटक बाहिर निस्केर फोटोग्राफर्सलाई मुस्कान दिइरहेका थिए ।
करिनाले एक पटक अन्तर्वार्तामा आफ्नो छोराको वरिपरी गार्ड भएको मन नपरेको बताएकी थिइन् । उनले आफूले त्यस्तो नचाहेको भन्दै छोराको वरिपरी गार्ड हुँदा म्यानेज गर्न गाह्रो हुने गरेको उनको भनाई थियो । तर तैमर जहाँ पनि जान्छन् फोटोग्राफर्स उनलाई फ्लो गर्छन् । आजभोली त तैमुरले फोटोग्राफर्सलाई चिनिसकेका छन् र त फोटोका लागि पोज दिन्छन।
विवाह गर्न लागेकी दीपिका किन डराउछिन यस्तो कुरा सँग !